Ihlanza i-air conditioner ukuze igweme iphunga elibi | Bezzia
Hlanza i-air conditioner ukuze ugweme iphunga elibi
UMaria vazquez | 21/06/2022 12:00 | Ikhaya
Ingabe uyivulile i- isimo somoya? Asingabazi ukuthi ngale gagasi lokushisa esilihlasele kuleli sonto elidlule, iningi lenu lizobe seliqalile. Futhi mhlawumbe, ngemva kokuphelelwa umsebenzi izinyanga eziningi, uye waqaphela iphunga elithile elingathandeki. Ungakhathazeki, hlanza i-air conditioner futhi inkinga izobe ingasekho.
Ukuhlanza i-air conditioner ngaphambi kokuyiqala kabusha entwasahlobo akusizi kuphela gwema iphunga elibi engakhiqiza ukungcola kunoma yiziphi izingxenye zayo. Kodwa, ngaphezu kwalokho, izothuthukisa ukusebenza kahle kwayo kwamandla. Zitholele wonke amaqhinga wokuyihlanza nathi.
ukungcola okunqwabelene kuzihlungi, ama-exchangers, amafeni noma ama-drain angabangela iphunga elibi elizokhiqizwa lapho umshini uvuliwe. Ukuhlanza kuyisihluthulelo sokuqeda lokhu nokwenza umoya oxoshiwe uhlanzeke futhi ungabi namagciwane. Vala idivayisi, landela isinyathelo esilandelayo ngesinyathelo futhi uzoyithola ibe yinhle njengentsha ngaphansi kwemizuzu engama-30.
1 Isinyathelo ngesinyathelo sokuhlanza
1.1 hlanza izihlungi
1.2 hlanza i-drain
1.3 Hlanza ingaphandle leyunithi
2 Izoyihlanza nini?
Isinyathelo ngesinyathelo sokuhlanza
Umsebenzi walokhu ukuhlunga umoya nokuvimbela amabhaktheriya namanye ama-microorganisms ukuthi anganda futhi alimaze ukusebenza kwemishini. Isihlungi esingcolile sehlisa ukusebenza kahle komshini futhi siyimbangela yokuqala yokunuka komoya okhishiwe.
Izihlungi zitholakala engxenyeni yangaphakathi yokuhlukaniswa, ngemuva kwe-grille. Ukuhlanza kuzodingeka uzisuse. Uma kuwukuhlanzwa kwesondlo, kuzokwanela ukusebenzisa isicoci se-vacuum ukususa uthuli nezinye izinsalela zokungcola. Nokho, ukuze uthole ukuhlanza kwentwasahlobo okuphelele, kuhle uwageze ngamanzi afudumele bese uyomisa emthunzini ngaphambi kokuwabuyisela emuva.
Ama-air conditioner axosha amanzi ngenxa ye-condensation eqoqa epanini lokudonsa. Uma la manzi ehlala emile - ngenxa yethambeka elibi epayipini - angabangela iphunga elibi futhi enze lula ukukhula kwamagciwane kanye nesikhunta.
Ukuphefumula kanzima nge-tube kungaba yisixazululo esilula, nokho akuyona into enconywa kuwo wonke amadivayisi. Ukwengeza, ekufakweni okuphakathi ngokuvamile kunzima ukufinyelela kukho. ukuyiphendulela kumodi yokushisa imizuzu embalwa kungaba esinye isisombululo.
Hlanza ingaphandle leyunithi
Nakuba izingxenye ezithambile kakhulu zivikelekile ngaphakathi kweyunithi, kuzodingeka futhi nakekela ingaphandle likagesi ukuze lingaqoqi uthuli nokungcola. Futhi ungakwenza kalula inqobo nje uma idivayisi isendaweni efinyelelekayo.
Isicoci se-vacuum nendwangu emanzi kancane kuzosiza ukugcina iyunithi ihlanzekile ngaphandle. I-grille, amaphiko okudonsa umoya kanye ne-casing kuzoba kuhle njengokusha ngaphandle kwesidingo sokusebenzisa noma yimuphi umkhiqizo okhethekile wokuhlanza.
Ngokuvamile, kunconywa ukuhlanza i-air conditioner ngaphambi kokuyiqala entwasahlobo nangemva kokusetshenziswa isikhathi eside ehlobo. Kabili ngonyaka njalo Uzogwema izinkinga eziningi. Ngaphezu kwalokho, akulimazi ukuhlanza idivayisi ngaphandle uma sihlanza okuvamile.
Kuyaqondakala ukuthi uma umoya ohlanzekile ojikeleza ekhaya lethu, izinkinga ezimbalwa zizovela. ugwayi, intuthu kashimula noma ikhishi lingenza isimo sibe sibi kakhulu futhi lidinga ukuhlanzwa okuvamile nokujulile.
Sikunikeze okhiye ukuze ukwazi ukuhlanza ama-air conditioner ekhaya lakho kodwa khumbula njalo ukufunda imanuwali yeziqondiso zomkhiqizi ngaphambi kokuthi uyiqale ukuze ugweme izinkinga. Iqembu ngalinye linezici zalo.
Okokugcina, uma ungabaza, sikweluleka ukuthi ushayele uchwepheshe noma uxhumane nesevisi yokulungisa ukufakwa. Ukuhlukaniswa yimishini ethambile edinga abasebenzi abaqeqeshiwe ukuze bakwazi ukuxazulula izinkinga ezithile.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Ikhaya » Hlanza i-air conditioner ukuze ugweme iphunga elibi
Uchungechunge oluqabulayo kakhulu lwasehlobo olunikezwa amapulatifomu
I-zucchini ne-mozzarella gratin